နေရာအမျိုးမျိုးမှ ဖြစ်ပေါ်သော ရေယိုစိမ့်မှုကို မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း? | Weber Cambodia
နေရာအမျိုးမျိုးမှ ဖြစ်ပေါ်သော ရေယိုစိမ့်မှုကို မည်သို့ဖြေရှင်းမည်နည်း?
All ရေလုံတားဆေး ကုန်စည်များ
အချိန်နှင့် လူအင်အားကို သက်သက်သာသာဖြင့် နည်းမှန်လမ်းမှန် Weber နဲ့အတူ ဖြေရှင်းပေးလိုက်ယုံဖြင့် မိုးတွင်းတစ်တွင်းလုံး အများတကာ ရေယိုနေချိန်တွင် သင်၏အိမ်တွင် စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာဖြင့် ဇိမ်ခံနေလိုက်ပါ။
ရေလုံရေတားခြင်းဆိုသည်မှာ အဆောက်အဦး၏ တည်ဆောက်ပုံ ထောင့်ချိုး ဧရိယာအမျိုးမျိုးမှ ရေယိုစိမ့်ဝင်မှုကို တားဆီးပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ အဆောက်အဦး၏ အပြင်ပိုင်းမှ စိမ့်ဝင်မှုသည် အတွင်းပိုင်းအထိ ရောက်ရှိကာ ပျက်ဆီးမှုများ မဖြစ်ရလေအောင် ထည့်သွင်း ကာကွယ်ပေးသင့်သည် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါသည်။ အတွင်းပိုင်းရှိ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများနှင့် အခြားသော အဆောက်အဦးတွင်း စိုထှိုငး်မှုများကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
နှစ်စဉ် မိုးတွင်းအချိန် ရေပုံမှန်ထိတွေ့ တတ်သော ဧရိယာနှင့် ရေလျှံမှုများဖြစ်ပေါ်တတ်သော နေရာများတွင် ရေလုံပြုလုပ်ပေးရန် အထူးအကြံပြုချင်ပါသည်။ မြေအောက်ရေများတိုးဝင်လာနိုင်သော မြေအောက်ခန်းနှင့် ဖောင်ဒေးရှင်း ဧရိယာများတို့တွင်လည်း အထူးပင် ရေလုံစံနစ်ထည့်သွင်းပေးသင့်ပါသည်။ မြေအောက်ခန်းရှိ ကြမ်းခင်းနှင့်နံရံကြားမှ အပြင်ပိုင်း မြေကြီးအတွင်းမှ ရေများ ဖိအားဖြင့် ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါသည်။ ထိုဖိအားကြောင့် အက်ကြောင်းထခြင်းများ တည်ဆောက်ပုံအရ ပျက်ဆီးယိုယွင်းမှုမာျး နှင့်အခြားသော စိုစွတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သော မှိုမဲများ၊ ဆွေးမြေ့မှုပြဿများလည်း ကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။
မိုးတွင်းအချိန်အခါတွင် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ရေယိုစိမ့်မှုကြောင့် မျက်နှာကြပ်၊ နံရံနှင့် ကော်လံတစ်လျောက် ယိုယွင်း ပျက်ဆီးမှုများကို တွေ့မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ မိုးမရွာသော နွေကာလအချိန်တွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အနေဖြင့် ရေလုံတားဆေး စံနစ် တစ်ကျအသုံးမပြုထားသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရေလုံစံနစ်ကို စံနစ်တကျထည့်သွင်းထားပေးခြင်းအားဖြင့် သင့်အိမ်၏တန်ဖိုးကို ရေရှည်မြင့်တင်ပေးနိုင်သည့်အပြင် နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် အိမ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ယိုယွင်းမှုကိုလည်း တားဆီးကာကွယ်နို်င်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
သင်ဘာကြောင့် ရေလုံတားဆေး လိုအပ်ပါသလဲ?
သင့်နေအိမ်အဆောက်အဦး၏ တည်ဆောက်ပုံ ကြံခိုင်မှုကို ရေရှည် ထိန်းသိမ်းပေး ထားနိုင်ပါသည်
မှိုမဲဆွဲခြင်း၊ ဆွေးမြေ့ယိုယွင်းခြင်းများကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်
သံချေးတက်ခြင်းမှ ကာကွယ်န်ိုင်သည့်အပြင် သစ်သား အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများကို လည်း ဆွေးမြေ့မှုမှ တားဆီးနိုင်သည်
မျက်နှာကြပ်နှင့် နံရံမှ ရေစိမ့်ဝင်ရောက်မှုကို တားဆီးနိုင်သည်
နေအိမ်အတွင်း စိုထိုင်းမှုကို ခုခံပေးနိုင်သည်
အဆောက်အဦး၏ တန်ဖိုးကိုလည်း မြင့်တင်ပေးပါသည်
အာခရိုင်းဘလစ် အခြေပြု ရေလုံတားဆေးသည် အသင့်သုံးအမျိုးအစား ရေလုံသုတ်ဆေးဖြစ်ပြီး အမိုးဆလပ်ပြင်များ၊ အိမ်ခေါင်မိုးများ၊ အပြင်နံရံနှင့် ရေယိုစိမ့်မှုအမျိုးမျိုးကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ UV နေရောင်ခြည်ကျရောက်မှုဒဏ်ကိုကာကွယ်န်ုိင်ပြီး အခန်တွင်းအပူချိန်ကို 8% အထိလျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ရိုလာဒလိမ့်တုံးနှင့် ဘရက်ရှဖြင့် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် စျေးကွက်အတွင်း အလွန်ရေပန်းစားပါသည်။
ဘိလပ်မြေ အခြေပြု ရေလုံတားဆေး
ဘိလပ်မြေအခြေပြု ရေလုံးတားဆေးသည် မြေအောက်ဧရိယာရှိ ရေကန်နှင့် အခြားသော ရေယိုစမ့်မှု အမျိုးမျိုးအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ရေဖိအားကို အတွင်းနှင့် အပြင် နှစ်မျိုးလုံး ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အနက် မီတာ 50 အထက်အထိ လက်ခံနိုင်ပါသည်။ ဘရှက်ရ်ှနှင့် ကိုင်းပြားနှစ်မျိုးဖြင့် အလွယ်တကူ သုတ်လိမ်းအသုံပြုနိုင်ပါသည်
ရောစပ်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးဖြင့် ကျုံ့ဆန့်နိုင်သော ရေလုံတားဆေး
အလိုက်ထိုက် ကျုံ့ဆန့်ပေးနိုင်သော စွမ်းအားကြောင့် ဤရေလုံတားဆေးမျိုးကို အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးရှိ ရေကူးကန်နှင့် တည်ဆောက်ပုံအရရွေ့လျားတတ်သော ဧရိယာအမျိုးမျိုးတို့တွင် ထည့်သွင်းပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
ရေလုံအာနိသင်ပါဝင်သော ကြွေပြာကပ်ဘိလပ်မြေကော်သည် ရေချိုးခန်း၊ မီးဖိုချောင်စသော ရေနှင့်ထိတွေ့နေရသော ဧရိယာများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ရေရှည်ရေလုံစံနစ်ကို ထည့်သွင်းအားဖြည့်ပေးခြင်းဖြင့် အဆောက်အဦး၏ တန်ဖိုးကို မြင့်တင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းကြောင့် ရေလုံတားဆေးများနှင့် အတူတွဲအသုံးပြုပေးပြီး ရေလုံအာနိသင်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါသည်။ အဆောက်အဦး၏ ထောင့်ချိုးဧရိယာများ ကြမ်းခင်းနှင့်နရံတို့တွင် ထည့်သွင်းမြှနှံပေးသင့်ပါသည်
ရေလုံအာနိသင်ပါဝင်သော ကွန်ကရစ် အရောအနှောဆေးရည်
ကွန်ကရစ် နှင့် မော်တာ တို့အတွက် ရေလုံရေကာအရောအနှော ကွန်ကရစ်၊ ပလာစတာ နှင့် ဘိလပ်မြေ ထပ်တိုးများတို့တွင် ရေလုံရေကာ ဂုဏ်သတ္တိ တိုးတက်လာစေရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
ကျွနု်ပ်တို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ